Wednesday 29th January 2020 07:51:40 in Wararkii Maanta by Madaxa Wararka
Wuxu soo jeediyey in Falastiiniyiintu yeeshaan dawlad madax bannaan iyo in loo aqoonsado goobaha [Yuhuudda lagu] deegaameeyey ee Daanta Galbeed in ay yihiin qaybo ka mid ah dhulka Israel Isaga oo barbar taagan ra'isal wasaaraha Israel,Benjamin Netanyahu, oo Aqalka Cad uu ku qaabilay, ayaa Trump wuxu sheegay in qorshihiisu "noqon karo fursaddii ugu dambaysay" ee Falastiiniyiintu helaan.
Madaxweynaha maamulka Falastiiniyiinta, Maxmuud Cabbaas, ayaa ganafka ku dhuftay qorshaas oo ku tilmaanay "shirqool" "Trump iyo Netanyahu waxa u sheegayaa in Quddus aanay iib ahayn, xuquuqdadayadoo dhami iib maaha gorgortanna kama galayno. Qorshahaaga iyo shirqoolkaaguna meel mari maayo" ayuu yidhi isaga oo khudbad ka telefishanka laga sii daayey ka jeedinaya magaalada Ramallah ee Daanta Galbeed.
Khariidaddu waxay "laban laab iyo dheeraad ka dhigaysaa dhulka Falastiiniyiinta oo caasimadiisu tahay bariga Quddus" halkaas oo Trump sheegay in Maraykanku safaarad ka furan doono. Ururka Xoraynta Falastiin ee magaciisa loo soo gaabiyo PLO ayaa sheegay in qorshaha Trump Falastiiniyiinta siinayo wax 15% in yar uun ka badan waxa uu ku sheegay "Falastiin ta taariikhiga ah".
Quddus "waxay ahaan doontaa caasimadda aan la qaybsamin ee Israel". Israel iyo Falastiiniyiinta labaduba waxay haystaan dood lagu qanci karo oo ay ku sheeganayaan magaalada barakaysan. Falastiiniyiintu waxay ku adkaysanayaan in bariga Quddus oo Israel ku qabsatay dagaalkii Bariga Dhexe ee 1967 ay noqoto caasimadda dawladooda mustaqbalka.
Wuxu fursad u yahay Falastiiniyiinta si "ay u helaan dawlad madax bannaan oo ay leeyihiin"- hase yeeshee faahfaahin badan ma bixinayo.
"Falastiiniyiinta iyo Israeli-yiinta toona laga kicin maayo goobaha ay deganyihiin" - taas oo sheegaysa in goobaha Yuhuudda lagu deegaameeyey ee Daanta Galbeed ee Israel haysataa sidooda ahaan doonaan.
Dhulka khariidadda Trump u qoondaysay Falastiiniyiintu "wuxuu muddo afar sannadood ah ahaan doonaa dhul bannaan oo aan waxba laga dhisi karin". Mudadaas Falastiiniyiintu waxay darsi doonaan qorshan oo waxa wada xaajood la geli doonaan Israel ay "ku buuxinayaan shuruudda ay dal ku yeelanayaan".
Masar oo qorshahan Trump ka hadashay ayaa sheegtay in ay qadarinayso dedaalka maamulka Maraykanku ugu jiro "sidii xal waara oo cadaalad ah looga gaadhi lahaa qadiyadadda Falastiin".
Warbixin ay soo saartay wasaaradda arimaha dibada ee dalkaas ayaa lagu sheegay in Masar "labada dhinac ee arintu dhex taallo ku tirtirsiyeyso in ay si degan u daraaseeyay aragtida Maraykanka ee nabadaynta oo ay dhan walba ka eegaan iyo sidoo kale in ay abuuran fursan dib loogu bilaabo wada xaajodka Maraykanku ka odayeynayo."
[DAAWO:-] Saldhig Militeri Oo Ruushku Doonayo Inuu Ka Sameysto Wadamo Somaliland Ka Mid Tahay Oo Bariga Afrika Ku Yaala
Xulafaysi Mise Nabadayn Bariga Dhexe.
Wararkii Ugu Danbeeyey Madaxweyne Trump Oo Ka Badbaaday in Lasumeeyo & Cida Ka danbaysay Oo La Ogaaday [ Muuqaal ]
[XAASAASI:-] Kulankii Xaashi Iyo Xirsi Oo Cabsi Laga Qabo In Gobolada Bariga Somaliland Mucaarad Isku Bedelaan + Saylici